Ma taqaan dalka ugu caajiska badan dunida, sidee-se lagu ogaaday? – Kasmo Newspaper
Ma taqaan dalka ugu caajiska badan dunida, sidee-se lagu ogaaday?
Updated - July 15, 2017 10:38 am GMT
London (Kasmo), Koox cilmi-baarayaal ah oo ka tirsan Jaamacadda Stanford ee California ayaa u kuurgashay heerka dhaqdhaqaaqa dadka dunida ku nool, si loo ogaado kuwa ugu caajiska weyn ee fadhiga badan.
Ka dib markii la cabbiray tillaabooyinka maalin kasta ay qaadaan, iyada oo la adeegsanayo taleefannadooda Smartphone-ka, waxaa soo baxday reer Indonesia in ay yihiin kuwa ugu caajiska badan dunida.
Waxaa la ogaaday in ay maalintii qaadaan wax ku dhow 3,513 tillaabo, halka kuwa ugu firfircoon noqdeen reer Hong Kong, oo qaada, qiyaastii, 6,880 tillaabo maalintii, iyada oo isku-celcelin ahaan maalintii Dunida la qaado 4,961 oo tillaabo.
Daraasadda oo lagu baahiyay Wargayska “Nature” waxay sawir ka bixinaysaa dhaqdhaqaaqa in ku dhow 717,527 oo qof oo lagu cabbiray xawaare-sheegga ku samaysan taleefannadooda Smartphone-ka.
Natiijooyinka daraasadda oo ku fadhida u kuurgalka 111 dal, laakiin shax ahaan laga soo qaaday 46 dal oo laga soo ururiyay xogta ugu yaraan 1,000 macaamiisha taleefannadaas , waxay muujinayaan xiriirka xagga cayilka iyo wadiiqooyinka lugta loogu talagalay ee goobaha qaar.
Dalalka ugu lugaynta yar waa kuwa laga diiwaangaliyay gaab weyn oo u dhexeeya dhaqdhaqaaqa ragga iyo dumarka oo runtii dhaqdhaqaaqooda oo ka yar midka ragga, waa dumarka-e, uu u babcay halista cayilka.
Farqiga 2da jinsi wuxuu ku sii badanyahay dalalka dhaqdhaqaaqu ku yaryahay ee Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya, wuxuuna ku yaryahay Switzerland iyo Japan oo aad looga lugeeyo cayilkuna ku yaryahay.
Qaab kale oo an wax lala yaabo ahayn wuxuu ku saabsanyahay hab-dhismeedka magaalooyinka: meelaha ay ku badanyihiin wadiiqooyinka lagu lugeeyo (Footpass) waxaa ka jira dhaqdhaqaaq badan, maalintii oo idil iyo xitaa toddobaadka gudihiisa.
Marka la tixgaliyo tirada 5,3da malyuun ee sannadkii u geeriyoota xanuunnada dhaqaaq la’aanta la xiriira, adeegsiga taleefanka Smartphone wuxuu wax ka tarayaa u kuurgalka caado-maalmeedka dadka.
Iyo waliba xoojinta siyaasadaha ku wajahan ka hortagga xanuunnada iyo dhiirrigalinta dhaqdhaqaaqa fayow ee goobaha furan, si loo yareeyo baruurta jirka ka sokow, xitaa halista walaahowga (Depression).